Research, Teaching & Training Jobs in Mandalay | MyJobs
Research, teaching & training jobs in Mandalay
ဘာသာရပ်ဆရာမသည် Subject Coordinator ၏ ညွှန်ကြားချက်များကိုလိုက်နာ၍ မိမိတာဝန်ယူ ထားသည့်အတန်းများ၏ သင်ကြားရေးကိစ္စအ၀၀တို့တွင် အဆင်ပြေအောင် တာဝန်ယူဆောင် ရွက်ပေးရန်၊ ကလေးများလိမ္မာယဉ်ကျေး၍ အရည်အချင်းများတိုးတက်အောင် သင်ကြားပေးရန်နှင့် မိမိဘာသာရပ်နှင့်ပတ်သက်၍ မိဘဆရာများအကြား အပြန်အလှန် ဆက်သွယ်အကြောင်းကြား မှုတို့ကို အဆင်ပြေစွာ ကူညီဆောင်ရွက်ရန်။
Fluency English Teacher
Grand Mandalar High School
Mandalay | Part Time | $ Confidential
Job Summary (အဓိကဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းတာဝန်အကျဉ်းချုပ်) To teach students using assigned resources to improve the fluency and comprehension of their English language. Fluency teacher must work together with the class teachers in order to createasafe, fun but disciplined working environment.
ကျောင်းသားကျောင်းသူများအား Music ဘာသာရပ်ကို ဂရုစိုက် သင်ကြားပေးနိုင်ရမည်။ ခေတ်နှင့် လျော်ညီသော သင်ကြားမှုစနစ်များကို အသုံးပြုသင်ကြားပေးနိုင်ရန် တာဝန်ရှိသည်။
ကျောင်းသားကျောင်းသူများအား ပန်းချီပညာရပ်များကိုဂရုစိုက် သင်ကြားပေးနိုင်ရမည်။ ခေတ်နှင့် လျော်ညီသော သင်ကြားမှုစနစ်များကို အသုံးပြုသင်ကြားပေးနိုင်ရန် တာဝန်ရှိသည်။
PE Teacher (Part Time)
ကျောင်းသားကျောင်းသူများအား Physical Education (PE) ကို ဂရုစိုက် သင်ကြားပေးနိုင်ရမည်။ ခေတ်နှင့် လျော်ညီသော သင်ကြားမှုစနစ်များကို အသုံးပြုသင်ကြားပေးနိုင်ရန် တာဝန်ရှိသည်။
Full Time 1 Part Time 4